မုတ်ဆိတ်မုတ်ဆိတ်မွေးကိုသင့်မျက်နှာပေါ် မူတည်၍ သင်မည်သို့ရိတ်ရမည်နည်း။ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Paco မာရီယာ Garcia က | | ရိတ်လိုက်ပြီ, လူနေမှုပုံစံစတဲ့
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကမုတ်ဆိတ်တစ်ပြန်လည်မွေးဖွားကြုံတွေ့ခဲ့ကြသည် မျက်နှာတစ်သင်းလုံးကကစားသမားအဖြစ်။ လူတိုင်းနီးပါးကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုဝတ်ဆင်, ဆိတ်, အမှိုက်…, စသည်တို့ သိသင့်သည်မှာမည်သည့်မုတ်ဆိတ်မျိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာနှင့်အကောင်းဆုံးနှင့်ကိုက်ညီသည်၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံရိပ်ကိုတိုးတက်စေသည်မဟုတ်။
မုတ်ဆိတ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာ၏ဘဲဥပုံမှသည်သာ။ ကြီးမြတ်သဟဇာတနှင့်အတူမျက်နှာအောင်မြင်ရန်အရာများစွာကိုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကျဆုံးခြင်း၏ပုံသဏ္determineာန်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးမုတ်ဆိတ်မွေးကိုရွေးချယ်ရမည်။
8 မေးစေ့နှစ်ခွရှိပါက ...
Philips မှ MG7720 / 15 ...
အများအပြားရှိပါတယ် တစ် ဦး မုတ်ဆိတ်ဝတ်ဆင်ရန်အကြောင်းပြချက်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲမှာပါတာကြောင့်၊ ငါတို့ဟာကျော်ကြားတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့စံနမူနာကိုလိုက်လျှောက်လို့ပါ။ ငါတို့မျက်နှာပေါ် မူတည်၍ မည်သည့်မုတ်ဆိတ်သည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သနည်း။
မုတ်ဆိတ် အမျိုးသားများအတွက်အလှဆုံးအလှကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံးမော်ဒယ်များ၏မုတ်ဆိတ်ကိုမြင်ကြသည်။ မုတ်ဆိတ်အမျိုးမျိုးကပင်စောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်ကဏ္ revolution ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ စုတ်တံများ၊ လိုချင်သောပုံသဏ္giveာန်ကိုပေးသောဖယောင်းများ၊ မုတ်ဆိတ်ကိုရေဓာတ်ဖြည့်တင်းရန်ဆီများ၊
အဆိုပါ elongated မျက်နှာများဖြစ်ကြသည် မုတ်ဆိတ်မွေးကြီးထွားဖို့အရှိဆုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူများ။ မျက်နှာသည် ပို၍ ကြာရှည်စွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ ဤအမှုများတွင်အသုံးပြုသင့်ကြောင်းမုတ်ဆိတ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် ထူသော sideburns နှင့်အတူမုတ်ဆိတ်တိုတောင်း။ ဤနည်းအားဖြင့်မျက်နှာသည်ပိုမိုရှည်လျားပြီးပုံသဏ္shapeာန်ပိုမိုနည်းပါးသောပုံပေါ်လာလိမ့်မည်။
သော့ထဲမှာပါတယ် မျက်နှာပေါ်မှာလခြမ်းတစ်မျိုးပုံဖော်ပါ၊ ကြောင်း elongated မျက်နှာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းနည်းပျော့ပြောင်း။
မင်းရှိရင် မျက်နှာရှည် အလွန်ကောင်းစွာဖြတ်ဖို့ရွေးချယ်ပါတယ် မေးရိုးအောက်မှာဘယ်တော့မှမဒါကမင်းရဲ့မျက်နှာကိုပိုပြီးရှည်စေတယ်။ သင်၏မုတ်ဆိတ်သည်မေးစေ့၏areaရိယာတွင်တိုပြီးမျက်နှာအားဤမျှကာလကြာရှည်စွာမပေါ်ပေါက်စေသည့်လဝက်ခန့်ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ဘေးထွက်ဘောင်တွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်ရမည်။
ဤသည်မှာ George Clooney သို့မဟုတ် Brad Pitt ကဲ့သို့သောသရုပ်ဆောင်များ၏အမှုအရာဖြစ်ပြီးမျက်နှာအသွင်အပြင်ဖြင့်သူတို့၏မုတ်ဆိတ်ကိုဤနည်းဖြင့် ဦး ဆောင်သူဖြစ်သည်။
ရင်ပြင်မျက်နှာပြင်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည် နဖူးပိုကျယ်။ ပါးပြင်မြင့်များနှင့်သိပ်မကပ်သောမေးစေ့။ ဆိတ်သငယ်သည်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သဖြင့်မျက်နှာသည်ပိုမိုရှည်လျားပြီးစတိုင်ကျသောသက်ရောက်မှုဖြင့်ဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ ဆိတ်မွေး? နှင့်အတူ မေးစေ့တွင်ဆံပင်များပိုနည်းပြီးနှစ်ဖက်စလုံးတွင်အနည်းငယ်နည်းသည်s ။ နှစ်ဖက်စလုံးကလုံးဝရိတ်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီဘူးသီးများ အလွယ်တကူထိန်းသိမ်းထားကြသည်ရိုးရိုးလျှပ်စစ်စက်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏အကောင်းဆုံးပုံရရန်မုတ်ဆိတ်ရိတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
El စတုရန်းမျက်နှာ ဒါဟာအသုံးအများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်နဖူး၌ကျယ်သောနဖူး၊ သိသိသာသာပါးနပ်သောကျောက်တုံးများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ဆိတ်မုတ်ဆိတ်သည်ဤမျက်နှာအသွင်သဏ္ဌာန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး၊ theရိယာသည်အကြီးမြတ်ဆုံးအာရုံစိုက်မှုဖြစ်ရန်မေးစေ့ကိုရှည်စေသည်။ မျက်နှာ၏အသားအရေကိုပျော့ပြောင်းစေရန်နှစ်ဖက်သဘောတူဖြင့်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်မုတ်ဆိတ်ကိုဖြတ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
Un မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်း ၎င်းတွင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့်ပါးနပ်ပါးလွှာများနှင့်ပါးပြင်ပေါ်၌ပါးနပ်စွာရှိခြင်းတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ မျက်နှာ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်ပိုမိုရှည်လျားသောထောင့်မုတ်ဆိတ်မုတ်ဆိတ်မဲကိုဝတ်ဆင်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ ပါးပေါ်အမြင့်ကဖြတ်။
အ puffy ပါးပြင်နှင့်ပါးပြင်နှင့်မေးစေ့လေး သောခံစားမှု generate မျက်နှာကတိုတယ်။ မျက်နှာ၏ဤအမျိုးအစားတွင်မုတ်ဆိတ်သည်ထောင့်ကျဆုံးသည်၊ မေးရိုးကိုအနည်းငယ်ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ဆို၍ မျက်နှာ၏ elongation ကိုခံစားစေသည်။ လည်းရှိလြှငျ နှစ်ဆမေးစေ့, အအောင်မြင်ဆုံးအရာကဆံပင်ကိုမေးစေ့အောက်တွင်လည်ပင်းသို့ ဦး တည်သည်။
အဆိုပါ အကယ်. မျက်နှာဘဲဥပုံအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်, အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများ rounded ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီမျက်နှာကပါး၊ မေးစေ့နဲ့နဖူးအကြားအချိုးအစားကိုအကောင်းဆုံးထိန်းထားပေးပါတယ်။ ၎င်းသည်စံပြမျက်နှာဖြစ်သည်။
မျက်နှာ၏ဤစတိုင်၌, မုတ်ဆိတ်အမြဲကောင်းစွာ fit လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်မျက်နှာ၏ကျန်အပေါ်သိပ်သိသိသာသာမုတ်ဆိတ်နှင့်အတူဆိတ်သငယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သငျသညျ may မျက်နှာကိုလည်းပတ်ပတ်လည်ရပ်တန့်ခြင်း၏ခံစားချက် ဒါဟာမုတ်ဆိတ်အားဖြင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖုံးကွယ်ခဲ့သည်။
ဒီမျက်နှာများနှင့်အတူ တစ် ဦး တြိဂံ၏ဆင်တူအရိပ်, သိသိသာသာအင်္ဂါရပ်များနှင့်အလွန်ရှည်လျားသောမေးစေ့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။
ဤပုံစံတွင်မုတ်ဆိတ်မွေးမျိုးကိုအကောင်းဆုံးအံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေသည် မုတ်ဆိတ်တစ်ခုလုံးသည်မာကျောမှုကိုခံစားရရန်အနည်းငယ်ကူညီပေးသည် ဒီမျက်နှာတွေကိုမှတ်သားထားတယ်
ဤကိစ္စများတွင်ထိုသို့ဖြစ်သည် ဒါဟာမုတ်ဆိတ်အလွန်ကောင်းစွာဂရုစိုက်ခံရဖို့အကြံပြုသည်မျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်သားနိုင်ပြီးမေးစေ့ကျော်မကြီးထွားစေရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ရက်တာရှည်မုတ်ဆိတ်မွေးစတိုင်လ်သည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ စိန်မျက်နှာတြိဂံနှင့်စတုရန်းနှင့်အတူရောထွေးသည်။ တကယ်တော့ငါတို့အနီးကပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းထိပ်ဒါမှမဟုတ်မေးစေ့မှာထက်ပါးinရိယာမှာကျယ်တာကကွဲပြားတယ်။
ဤပုံစံ၏အကောင်းဆုံးမုတ်ဆိတ်သည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည် တစ် ဦး နှုတ်ခမ်း - ဘောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူဆိတ်သငယ်။ နှုတ်ခမ်းအောက်တွင်နှုတ်ခမ်းမွှေးနှင့်နောက်မုတ်ဆိတ်တပ်ထားသည့်ရွေးစရာလည်းရှိသည်။ ဤသည်ကိုကြည့် Johny Deep နေဖြင့်လူကြိုက်များခဲ့သည်။
မေးစေ့နှစ်ဆရှိသူများအတွက် အကောင်းဆုံးကအပြည့်အဝမုတ်ဆိတ်မွေးဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်မျက်နှာကိုသန့်စင်ပြီးနှစ်ဆမေးစေ့ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ မုတ်ဆိတ်ကိုအတော်လေးထောင့်ကျစေပြီးလည်ပင်းကိုဖြတ်မသွားဘဲမေးစေ့တွင်ဖြောင့်တန်းစွာအဆုံးသတ်ပါ။
ဒါပေမယ့်လည်းအရေးကြီးပါတယ် သင်မုတ်ဆိတ်မွေးကိုမဝတ်လိုပါလျှင်၊ သင်၏မျက်နှာသည်ပါးလွှာပါကတိုတောင်းသောဗိမာန်တော်ကိုရွေးချယ်ပါ၊ အဆီရှိပါကပါးစပ်ကိုပိုမိုဆွဲရန်ဗိမာန်တော်ကိုအနည်းငယ်ကြာကြာထားခဲ့ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » ရိတ်လိုက်ပြီ » သင့်မျက်နှာပေါ် မူတည်၍ မုတ်ဆိတ်အမျိုးအစား
ရီကာဒို "DjGomita" Garcia Paredes ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မုတ်ဆိတ်က U. U ကိုမပိတ်ဘူး။ ငါကပြင်သစ် Fork မုတ်ဆိတ်နဲ့အရမ်းပျော်မယ်။
Ricardo "DjGomita" García Paredes အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီ၊ ငါ hulihee xD မှလွဲ၍ စာရင်းရှိအရာအားလုံးအားလုံးနီးပါးကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာကျွန်ုပ်၏ခေါင်းပေါ်တွင်မုတ်ဆိတ်များနှင့်ဆံပင်အနည်းငယ်ရရှိသည်။
Hugh Jackgman နှင့် Justin Timberlake တို့၏မျက်နှာများသည်ပတ်ပတ်လည်ရှိလှသည်။